GlobalNet | Zoom Webinar Licenses Update Special Price List
Zoom Webinar Licenses Update Special Price List
? Zoomအသုံးပြုသူ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ် customerများအတွက် အထူးပြောင်းလဲထားသော Zoom Webinar Licenses updateဈေးနှုန်းများကို အကြောင်းကြားပါရစေ ?
ဇူလိုင်လ (၂၅)ရက်နေ့မှစတင်၍ Zoom Webinar Licenses များကို အောက်ပါအချက်အလက်အတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
❖ Participants 500 Webinar License မှ စတင်၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး New Entry Level အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊
❖ Participants 500 Webinar License မှာ နှစ်စဥ်ကြေး US$ 1,400 မှ US$ 690 သို့လျှော့ချခြင်း၊
လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Customers များအတွက် –
❖ Participants 100 Webinar License ကို အသုံးပြုနေသော Customers များ ထပ်ဆောင်းအပိုကြေး ပေးစရာမလိုပဲ Participants 500 Webinar License သို့တိုးသွားခြင်း၊
❖ Participants 500 Webinar License ကို အသုံးပြုနေသော Customers များ ထပ်ဆောင်းအပိုကြေး ပေးစရာမလိုပဲ Participants 1000 Webinar License သို့တိုးသွားခြင်း၊ အစရှိသောအချက်အလက်များအတိုင်း ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်သွားမည်ကို Customer များအား အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
? မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ဦးထဲ Official Partner အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသော Global Technology (GlobalNet) သည် Zoom Solutions Package & Zoom Rooms Product Suite အလုံးစုံကို Official License များဖြင့် One Stop Service ရရှိနိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
? Multinational Companies များ, Large Enterprise များ၊ Embassy များ၊ Small & Medium Business များ၊ Associations များ ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ Work From Home ၊ Remote Working ပြုလုပ်နေသော လုပ်ငန်းများအားလုံး အတွက် Zoom Meetings, Zoom Video Webinars အစရှိသည့် License account များ၊ Zoom Certified Engineers များမှ Zoom Room Set up ပြုလုပ်ပေးခြင်းများ အပြင် Local Partner တစ်ဦးအနေဖြင့် သုံးစွဲသူများအတွက် လွယ်ကူအဆင်ပြေနိုင်အောင် Zoom FREE Trainings များကိုလည်း ရယူ နိင်ပြီဖြစ် ကြောင်း သတင်း ကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
? GlobalNet မှ Partner Supporting အနေနဲ့
? Free Setup & Zoom Experts Training
? Billing can pay with Local Currency
? Local team support with professional engineers
? Integration with other software/application
? Zoom Room create with Logitech Camera and Audio Devices
✅ Integration with other software /app
✅ Free Trial Accounts
✅ Demo Account for Business Plan
✅ Special Discounts for above 10 license for any plan.အစရှိတဲ့အခွင့်အရေးများကို ရယူနိုင်ဖို့ အခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။ ??
? Learn more: globalnet.com.mm/zoom/
☎️ Hot Line Contact : +959 883080874 , +959 883080849
? Email : digitalsales@globalnetmm.com , digitalservices@globalnetmm.com